🖼️ Farshaxanka & Farshaxanka | Booqo Hultsfred
Bogga hore » 🥾 arag oo samee » 🎟️ Soo jiidasho » 🖼️ Farshaxanka & Farshaxanka
Gallery-yada, goobaha farshaxanka, madxafyada iyo istuudiyaha farshaxanku waxay siiyeen Hultsfred nolol farshaxan oo muhiim ah. Kala duwanaanshuhu wuxuu muujinayaa ballaca iyo qotodheeraanta halka farshaxanka casriga ah iyo taariikhda fanku ay qiimo siman leeyihiin.
Sawir qaade iyo farshaxan Emma Jansson
Sawir qaade iyo farshaxan Emma Jansson: Magacaygu waa Emma Jansson. Waxaan ku noolahay beer ku taal banaanka Hultsfred ee Småland aniga iyo lammaanahayga iyo annaga
Dukaanka Naqshadaynta Hässlid
Dukaanku wuxuu ku dhow yahay Hotell Dacke oo ku yaal Virserum. Wax soo saarka maxaliga ah iyo kuwa gobolka. Farshaxan, farshaxan gacmeed, qaab iyo naqshad. Wood, textiles, dhoramics, dhogor, galaas iyo waxyaabo kale oo badan
Guntinku wuxuu ku yaal meel u dhow halka baabuurta la dhigto ee aagga ku yaal. Waa mid ka mid ah doomaha waaweyn ee Iswiidhan. Hubka ku yaal Virserum wuxuu jiray 23 sano. Laba dabaq ayaa laga heli karaa
Sawir Qaade Fine Fiican Geertjan Plooijer
Sawir qaadis iyo farsamooyin duug ah oo sawir qaade ah Geertjan Plooijer sawir qaade / farshaxan yaqaan. Wuxuu ka yimid waqooyiga Friesland ee Holland laakiin wuxuu ku nool yahay kana shaqeeyaa Mörlunda. Isaga
Buur yar, oo leh muuqaal qurux badan, tuulada Tälleryd oo ka baxsan Vena waa beerta Nybble. Lillstugan-ka wanaagsan, hal-abuurka ayaa ku qulqulaya istuudiyaha farshaxanka ee Steve Balk.
Farshaxanada Lena Loiske
Dhashay 1950. Aqoonyahan cilmiga bulshada. Si xamaasad leh ayaa loo bilaabay rinjiyeynta muddo dhowr sano ah oo lagu noolaa Tansaaniya (1995 - 1997). Rinjiga badanaa acrylic. Wax walba laga soo bilaabo muuqaalka ilaa deerada
Annika Mikkonen Qod
… ..Waxaan doorbidayaa rinjiyeynta iyo sawirashada nolosha dhabta ah meelkasta oo aan joogo. Annika waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay Vagnhärad, Södermanland iyo ku dhowaad 30 sano
Farshaxanka Stinsen iyo farshaxanada
Waxaad ka heli doontaa farshaxanka Stinsen iyo farshaxanka aagga "Bolaget" ee Virserum. Halkaan waxaa ku yaal bandhigyo iyo iibin farshaxanno, farshaxanno, been abuur, alwaax, dhar iyo dhoobada
Badhtamaha kaymaha Småland waxaa ku yaalo jaaliyad yar oo Virserum leh maktabad farshaxan oo weyn. Iyada oo leh aag bandhig ah oo ah 1600 sqm, farshaxanka casriga ah ayaa lagu muujiyay bandhigyada
Emil ee farshaxankii Lönneberga
Astrid Lindgren buuggeedii ugu horreeyay ee Emil ku saabsan Lönneberga oo ay la socoto sawirada Björn Berg waxaa la daabacay 1963 qof walbana si dhakhso leh ayuu u jeclaa. Emil iyo kaftankiisa
Waxaad khibrad u leedahay 4 oo mitir laba jibbaaran oo ku taal Skallagrim - Gerts Trädgårdsgalleri oo ay ka buuxaan ilaa 000 farshaxan oo dhoobo ah, weelka dhagxaanta, boorta weyn, alwaax iyo naxaas. Halkan
Xusuusta Nils Dacke iyo dhacdooyinkii Dackefejden, taalladan waxaa laga taagay 1956 Nils Dacke. Farshaxanistaha Arvid Källström ayaa qaabeeyay taallada si Nils Dacke uu u sameeyo
Bo Lundwall, wuxuu ku dhashay Hultsfred 1953, wuxuu istuudiyaha ku leeyahay gurigiisa iyo qoyskiisa, Hultsfreds Gård, oo laga soo bilaabo qarniyadii 1600aad iyo 1700aad. Bo waxbartay
Galleri Kopparslagaren, Rallarstugan iyo Glaspelleuset waa qaar ka mid ah jawiga dhaqan ahaan iyo taariikh ahaan qiimaha badan ee xaafada. Storgatan oo ku yaal bartamaha Hultsfred waxaa ku yaal dhismooyin waaweyn